करोडौमा खेल्ने बलिउडकी अभिनेत्री प्रियंकाको पहिलो कमाई कति ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»करोडौमा खेल्ने बलिउडकी अभिनेत्री प्रियंकाको पहिलो कमाई कति ?
करोडौमा खेल्ने बलिउडकी अभिनेत्री प्रियंकाको पहिलो कमाई कति ?
By मनिषा थापा on १७ चैत्र २०७४, शनिबार ०९:३२ हलिवुड/बलिवुड
बलिउडकी देशी गर्ल प्रियंका चोपडालाई आज बलिउडकै सबैभन्दा महंगी र नम्बर वान नायिकाको रुपमा लिने गरिन्छ । फेसन फिल्मबाट उनको करियरले गति लिएको हो । त्यसभन्दा अगाडी उनका थुपै फिल्महरुले असफलता पाएको थियो ।
धेरै फिल्महरु पाएपनि उनलाई त्यसभन्दा अगाडी निकै अभागी नायिकाको रुपमा लिईने गरिन्थ्यो । तर तिनै अभागी मानिएकी नायिका प्रियंका आज भने करोडौ करोडमा खेल्ने गर्छिन् ।
पुर्व मिस वल्र्ड समेत रहेकी उनले आफ्नो पहिलो कमाई ५,००० भएको बताएकी छिन् । पैसाको महत्व निकै बुझेकी उनले कमाएको पहिलो कमाई आमालाई राख्न दिएकी बताएकी छिन् । जुन रकमलाई उनले आजसम्म पनि खर्च गरेकी छैनन् । आफ्नो पहिलो कमाईलाई सुरक्षित तरिकाले राखेकी छिन् ।
बलिउडमा भन्दा हलिउडमा आफनो करियर राम्रोसंग चलाईरहेकी प्रियंकाले क्वांटिको शोबाट निकै चर्चा कमाईन् भने उनले यतिबेला थुप्रै हलिउड प्रोजेक्टहरु गर्देछिन् । आफनै होम प्रडक्सन खोलेर विभिन्न भाषाका फिल्महरु निर्माण गर्दे आईरहेकी प्रियंकाले लामो समयदेखि बलिउड फिल्ममा काम गरेकी छैनन् ।